DEG DEG:- Yuusuf Dhagey oo noqday shaqsigii Afaraad ee loo doorto kursiga Aqalka Sare – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Yuusuf Dhagey oo noqday shaqsigii Afaraad ee loo doorto kursiga Aqalka Sare
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Cadaado ayaa waxay sheegayaan in Xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas (Dhagey) uu noqday qofkii Afaraad ee loo doorta kursiga Aqalka Sare ay Galmudug ku leedahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas (Dhagey) oo beel ahaan kasoo jeeda beesha Duduble islamarkaana ka mid ahaa musharixiinta u loolamayso 8-da kursi ee Aqalka Sare ayaa noqday qofkii Afaraad ee ku guuleysta kuraasta Aqalka Sare ay Galmudug ku yeelan doonto baarlamaanka cusub, kadib markii uu ka guuleystay musharaxii la tartamayay Cabdulle Xasan Nuur.
Xildhibaan Dhagey ayaa helay codad gaaraya 65-cod halka Cabdulle Xasan Nuur oo ahaa musharaxii isaga la tartamayay uu isna helay 7-cod oo kaliya.
Sidaas awgeed xildhibaan Yuusuf Dhagey ayaa ku guuleystay xilkaasi, waana musharixii Afaraad oo ilaa iyo haatan kusoo baxay liiska musharixiinta Galmudug ee uga mid noqonaya Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Dhinaca kale, waxaana weli xarunta baarlamaanka Galmudug ee magaalada Cadaddo weli ka socda cod-bixinta musharixiinta Aqalka Sare, si loo dhameystiro 8-da xubnood ee Galmudug uga mid noqon doona Aqalka Sare ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, tartanka musharixiinta u loolamayso 8-da kursi ee Aqalka Sare ee Galmudug uga mid noqonaaya baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay kan ugu miisaanka culus marka loo eego maamul gobaleedyada kale ee dalka ka dhisan.